Macallinka Chelsea ee Frank Lampard oo ka hadlay suurto-galnimada uu amaah ugu bixi karo Christian Pulisic - Hargeele - Wararka Somali State
(London) 19 Okt 2019. Macallinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay suurto-galnimada uu Christian Pulisic ku bixi karo, waxaana uu meesha ka saaray inuu Pulisic amaah ka tagi karo bisha Janaayo.
Frank Lampard ayaa difaacay ciyaaryahankiisa Christian Pulisic, maadaama uu xiddigan reer Mareykan la dhibtoonayo inuu la qabsado nolosha Chelsea.
Markii la weydiiyey haddii xiddigan garabka ka dheela uu amaah ku bixi karo bisha Janaayo ee sanadka cusub, macallin Lampard ayaa hal eray kaga jawaabay arrintaas, waxaana uu yiri ‘Maya’.
“Marka Christian yimaado halkaan, waa inaan ilaallinaa xaqiiqdaas, sababtoo ah waa yar yahay,” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Christian Pulisic uusan amaah kaga bixi doonin bisha Janaayo kooxda Blues.
Mareykanka:R/Wasaare Khayre Iyo Wasiirka Maaliyadda Norway oo kulmay